पढ्नयोग्य वेब सामग्रीका लागि चार दिशानिर्देशहरू Martech Zone
शुक्रबार, फेब्रुअरी 19, 2010 आइतबार, जुन 28, 2015 बिल अंग्रेजी
Readability एक त्यस्तो क्षमता हो जहाँ व्यक्तिले पाठको अंश पढ्न सक्दछ र बुझ्दछ र ती भर्खर के पढ्छ भनेर सम्झिन्छ। यहाँ वेबमा तपाईंको लेखनको पढ्न योग्यता, प्रस्तुतीकरण र अभिव्यक्तिको सुधार गर्ने केही सुझावहरू छन्।
१. वेबको लागि लेख्नुहोस्
वेबमा पढ्न सजिलो छैन। कम्प्युटर मोनिटरहरूको कम स्क्रिन रिजोलुसन छ, र तिनीहरूको अनुमानित प्रकाशले हाम्रो आँखा थकित तुल्याउँछ। थप, धेरै वेबसाइटहरू र अनुप्रयोगहरू टाइपोग्राफी वा ग्राफिक डिजाइन को कला मा औपचारिक प्रशिक्षण बिना मान्छे द्वारा निर्मित छन्।
लेखन प्रक्रियाको क्रममा विचार गर्न यहाँ केहि बुँदाहरू छन्:
औसत प्रयोगकर्ता पढ्नेछ अधिकमा 28% वेब पृष्ठमा शब्दहरूको, त्यसकारण तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने शब्दहरू बनाउनुहोस्। हामीले ट्युटिभमा हाम्रा ग्राहकहरूलाई सुझाव दिईएको मार्गनिर्देशन भनेको तपाईंको प्रतिलिपि आधामा काट्नु हो, र फेरि यसलाई आधा काट्नु हो। हामीलाई थाहा छ कि यसले तपाईंको भित्री-टोलस्टोइ रोएको छ, तर तपाईंको पाठकहरूले यसलाई कदर गर्नेछन्।
स्पष्ट, प्रत्यक्ष, र कुराकानी भाषा प्रयोग गर्नुहोस्।
"मार्केटिज" बाट जोगिनुहोस्, अतिशयोक्तिपूर्ण घमण्डपूर्ण पाठ जसले खराब विज्ञापनहरू भर्दछ ("तातो नयाँ उत्पाद!")। यसको सट्टा, उपयोगी, विशिष्ट जानकारी प्रदान गर्नुहोस्।
अनुच्छेद छोटो राख्नुहोस्, र प्रति अनुच्छेद एक विचारमा आफैलाई सीमित गर्नुहोस्।
बुलेट सूची प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारीलाई शीर्षमा राख्दै, इन्भर्टेड-पिरामिड शैली लेखन प्रयोग गर्नुहोस्।
२. तपाईको सामग्री उप-हेडरको साथ व्यवस्थित गर्नुहोस्
उप-हेडरहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् प्रयोगकर्तालाई सामग्रीको पृष्ठ पट्टि भस्म गर्नका लागि अनुमति दिन। तिनीहरू पृष्ठलाई प्रबन्धनीय सेक्सनहरूमा विभाजन गर्छन् र प्रत्येक सेक्सनको बारेमा के घोषणा गर्दछ। यो एक प्रयोगकर्ताको लागि महत्त्वपूर्ण छ जुन पृष्ठ स्क्यान गर्दैछ जुन सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पत्ता लगाउन कोशिस गर्दैछ।
उप-हेडरले एक दृश्य प्रवाह पनि सिर्जना गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आँखा तल सामग्रीमा सार्न अनुमति दिन्छ।
तपाईंको वेब पृष्ठको मुख्य भाग (नेभिगेसन, फुटर, आदि बाहेक) तीन आकारहरूमा सीमित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्: पृष्ठ शीर्षक, उप-हेडर, र बडी प्रतिलिपि। यी शैलीहरू बीचको भिन्नता स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुहोस्। आकार र तौलमा एकदम थोरै फरकले मिलेर काम गर्नुको सट्टा तत्त्वहरूलाई टक्राउँनेछ।
लेख्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि उप-हेडरहरूले पाठको बिन्दुलाई घोर बनाउँदछ जुन उनीहरूले मुठ्ठी शब्दहरूमा प्रतिनिधित्व गर्दछन्, र उपभोक्ताले माथिको वा तलको खण्ड पूरै पढिसकेका छन भनी नमान्नुहोस्। अत्यधिक प्यारो वा चतुर भाषा बेवास्ता गर्नुहोस्; स्पष्टता आलोचनात्मक छ। अर्थपूर्ण र लाभदायक उप-हेडरहरूले पाठकलाई व्यस्त राख्दछन् र पढ्न जारी राख्न आमन्त्रित गर्दछ।
For. स्वरूपण गरिएको पाठको साथ कुराकानी गर्नुहोस्
इटालिक: इटालिक्स जोडको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, र तपाईंको वाक्यहरू भ्वाइस इन्फ्लिकेसन लागू गरी अधिक कुराकानी टोन दिनुहोस्। उदाहरणको लागि, "मैले तपाईंलाई भनेको थिएँ" भन्ने वाक्यांश बंदर"" I भन्दा फरक फरक अर्थ राख्दछ भन्नुभयो तपाईंले मैले एउटा बाँदर देख्नुभयो। ”
सबै क्याप्स: व्यक्तिले अक्षरको अक्षरमा गणना नगरी शब्दका आकारहरू बनाएर पढ्छन्। यस कारणका लागि सबै CAPS मा पाठ पढ्न अझ गाह्रो छ किनकि यसले हामीले देखेका चीजहरूको आकारलाई बाधा पुर्‍याउँछ। यसको लामो पाठ वा पूर्ण वाक्यको लागि प्रयोग नगर्नुहोस्।
बोल्ड: बोल्डले तपाईंको पाठको अंश खडा गर्न सक्छ, तर यसलाई अधिक प्रयोग नगर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग ठूलो संख्याको पाठ छ र ​​त्यसमा जोड दिन आवश्यक छ, यसको सट्टामा पृष्ठभूमि र using प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्।
Ne. नकारात्मक ठाउँ ओह-पोजिटिभ हुन सक्छ
पाठको रेखाहरू, अक्षरहरूका बीच र प्रतिलिपिका ब्लकहरू बीच ठाउँको उचित मात्राले पढ्ने गति र समझलाई सुधार गर्दछ। यो सेतो (वा "नकारात्मक") स्थान भनेको के हो भने व्यक्तिले अर्कोबाट एक अक्षर छुट्याउन मद्दत गर्दछ, पाठको ब्लकहरूलाई एक अर्कासँग जोड्दछ, र पृष्ठमा तिनीहरू कहाँ छन् भनेर ट्र्याक राख्छ।
जब तपाईं पृष्ठमा हेर्दै हुनुहुन्छ, स्किन्ट गर्नुहोस् र तपाईंको आँखा ब्लर गर्नुहोस् जब सम्म कि पाठ अपरिहार्य हुँदैन। के पृष्ठ सफा भागहरूमा विभाजन गर्छ? के तपाई भन्न सक्नु हुन्छ कि प्रत्येक सेक्सनको लागि हेडर के हो? यदि होईन भने तपाईले आफ्नो डिजाईन पुन: प्रयोग गर्नु पर्ने हुन सक्छ।
प्रयोगकर्ताहरू कत्ति थोरै पढ्छन्? Jakob Nielsen द्वारा
कसरी उत्कृष्ट उपशीर्षकहरू लेख्ने ब्रायन क्लार्क द्वारा
पढ्नयोग्य वेब टाइपोग्राफीको लागि १० सिद्धान्तहरू म्याट क्रोनिन द्वारा
टैग: सामग्री मार्केटिङपठनीयतापढ्नयोग्य
बिल (illbillcenglish) मा डिजाइन प्रमुख छ ट्यूटिभ र अमीगा 500०० को दिनदेखि नै कम्प्युटरमा कला बनाउँदै आएको छ। इन्टरनेट र वेब ब्राउजरले अन्तत: उनको ग्राफिक्स डिजाइन र अनुक्रमिक कलामा आजीवन चासोहरू प्रविधि र प्रोग्रामिंगको मोहको साथ मर्ज गर्न अनुमति दियो। बिलको शौकमा मार्वल हास्य, गितार हीरो, र चलचित्रहरूको बारेमा पोडकास्टहरू समावेश छन्। धेरै जसो उसका डिजाईन सेसनहरू डायट कोकको प्रशस्त मात्रामा ईन्धनको रूपमा लिइन्छन्। उहाँ हाल वेस्टफिल्डमा IN, आफ्नो अद्भुत पत्नी, निकोल र समान आश्चर्यजनक छोरा, भानसँग बस्नुहुन्छ।
तपाईंको अर्को बैठकको बारेमा
यहाँ उत्कृष्ट सामग्री! धेरै पटक कम भनिएको राम्रो धेरै राम्रो छ कि धेरै, धेरै, धेरै नराम्रो भनिएको छ। मेरो मनपर्ने पुस्तकहरू मध्ये एक हो "मलाई सोच्न नदिनुहोस्।" उही कारणहरु को लागी केहि यहाँ औंल्याएको छ।